Caabudwaaq - Wikipedia
Magaalo in Galguduud, SoomaaliyaTemplate:SHORTDESC:Magaalo in Galguduud, Soomaaliya
Caabudwaaq () waa magaalo ku taal gobalad dhexe ee Dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka galgaduud. Waa magaalo ka mid ah magaalooyinka uguqadiimisan somaliya
4 Maamulka Degmada Caabudwaaq
5 Ganacsiga iyo Dhaqaalaha
Caabudwaaq waxay deegaan heer Ceel waxay yeelatay 1958 waxaana sal dhig u ahaa alaha naxariistii jano siiyee xaaji Sacdi Jaamac Doode (Reer Siyad Xuseen ) waxuuna ahaa, Cali Mire (Reer Siyaad Xusen) labadaas oday oo lahaa magaalada qadiimiga ah ama faras magaalaha waxaa weheliyay odayaal badan oo mareexaan ah qaara soomaali ahaa oo gadaal kasoo dagay siina horu mariyay magaalada waxay ahaayeen odayaashii qoday baraagihii ugu horeeyay oo hada barkadahaasi ay cabudwaaq dhaaftay oo gudaha magaaladu dhinac waliba u dhaaftay tuulo, magaalo iyo degmo inay noqoto mudo 70 ilaa 90 sano hada laga joogo. Deegaankii uu casriyeeyay Dabcasar ayaa magaalada Caabudwaaq ka dhigay magaalo rasmi ah.
Magaalada waxaa dib u dhis ku sameeyay sameyay Cali Mire Oo aha Hogaanka Beesha Reer Siyaad xuseen
Dowladihii wadanka mid walba qadarin iyo qiimeyn ayay siisay ilaa magaalada Caabudwaaq ay noqotay degmada ay haatan tahay. magaalada caabud waaq waxaa ku yaal geed miri miri ah oo uu beeray alaha u naxariistee xaashi jaamac oo hada dadka magaaladu u yaqaan doqon ma waaye oo kuyaal dhexda magaalada magaalada qoysaskaan badani ma daganayn waxay soo dageen dagaaladii kadib waa soo bara kaceen sida reer balanbal iyo reer dhabad ama galiinsoor taariikh badan baan ka haynaa laakiin waa horu dhac hadaad rabto taariikh buuxda tag caabud waaq oo aad ka heli doonto waxii macluumaad ah.
Magaalada Caabudwaaq wexeey deegan u tahay dhammaan dadka soomaliyed gaar ahaan Beesha Sade mareexaan oo ay dhammaantood u simanyihiin
Magaalada Caabudwaaq waxay dhacdaa dhanka waqooyi ee gobolka Galgaduud, galbeed wadada dheer ee isku xirta gobolada koonfureed iyo waqooyi ee Soomaaliya.
Dhanka koonfureed magaalada ugu wayn ee Caabduwaaq ugu dhow waa magaalada Baladwayne. Dhanka waqooyi magaalada Gaalkacyo ayaa ugu dhow. Magaalada Caabudwaaq koonfur, galbeed iyo waqooyi waxaa kaga teedsan magaalooyinka Balanbal, Dhuusamareeb iyo Ceelbuur. cadaado oo ah degmada ugu dhaw
Magaalada Caabudwaaq dadkeeda dhowr tiro ayaa lagu sheegaa balse tirada mar walba waa agagaarka
Caabudwaaq oo martisoorka ku wanaagsan ayaa waxay noqotay magaalo soo jiidata ganacsiga gaadiidka u kala goosha gobolada wadanka.
Maamulka Degmada Caabudwaaq
Kadib dagaaladi dhexe ee Soomaliya waxaa inta badan magaalada Caabudwaq ka amrin jiray Culuma'u diinka ahlusunna waljam'ea. Sanadka 2015ka ayaa waxaa Magaalada Cadaado lagu dhisay Maamul lagu magacabay Galmudug taasi oo ka kooban Gobollada Galgaduud Iyo Mudug waxaana Waqooyiga Gobolka Galgaduud u matalo Maamulka Galmudug Madaxweyne Ku Xigeenka Maamulkasi Maxamed Cabdi Xashi 'Carabey'.
Caabudwaaq waxaa soo maray marxalado iyo heerar kala duwan waxaana bulshada Caabudwaaq ay aad u xasuustaan waayihii Cagabararka oo bilowday berigii qaxa iyo barakac ka dhacay magaalada Caasimada ee Muqdisho.
Sanadadii Cagababarka 1992-1995 waxaa ay Caabudwaaq noqotay goob amaan isla markaana noqotay xarunta ganacsiga iyo kala gediska gaadiidka shixnadaha ganacsiga sida kuwa waqooyi ka yimid iyo kuwo koonfur ka yimid oo iyagu markaa aan xor u aheyn inay toos isugu gudbaan. Magaalo kale oo markaas xaqdhowrtay ganacsigaas ma jirin; dhanka waqooyi iyo dhanka koonfureed toona.
Magaalooyinka kale ee koonfurta wadanka sanadadaas waxay ahaayeen goobo dadka lagu xasuuqo amni daro aad u darana ka jirtay.
Degmada Caabudwaaq waxaa ka howlgala Isbitaalka Xadiya oo uu agaasime ka yahay Dr. Cabdirisaaq Cabdullaahi Warsame. Dr. Cabdirisaaq iyo taageerayaashiisa waxay ku hanwaynyihii in mudo gaaban ka dib Caabudwaaq noqoto rugta caafimaad ee Baladwayne, Adis Ababa ilaa Gaalkacyo looga yimaado.
Isbitaalka Hooyooyinka iyo Caruurta ee Caabudwaaq (IHCC) oo furmay bishii 9aad 2009 ayaa sidoo kale ka howlgala magaalada Caabudwaaq. IHCC wuxuu gacansaar iyo wadashaqayn la leeyahay Isbitaalka Hooyooyinka iyo Caruurta ee Baardheere.
Iskaashi xaga tababarada ah ee xirfadaha adeegyada caafimaadka ayaa ka jira Isbitaalka Xadiya, IHCC iyo Isbitaalka Hooyooyinka iyo Caruurta ee Baardheere.
warkaan waxaa qoray qof beenlow ah waxna kamajiraan marka waxan dhihilahaa hadaa been sheegeeyso been macquul ah ayaa lasheegaa laakiin guryaha buushash ka ah oo reer siyaad xuseen iyo reer dalal ad ku shegtay huteelo caalami ah waa arin yaab leh midakale waxaa tiri caabudwaaq waxaa kuyaaro t-mall caalami ah oo shan dabaq kabooban suaasho waxay tahay caabudwaaq marka hore dabaq maleedahay t-mall warkiisa iskadaaye tanlabaad waxaa tiri caabudwaaq waxaa kuyaalo isbitaal lagasoo aado gaalkacyo, baladwayne iyo adis ababa warkaas cidna kaadhagaysan mayso macquul ma,ahay xitaa caruurta yaryar loogumasheekeeyo ee bulshada beenta kadhaaf jaahilyahow beenlowga ah
Caabudwaaq dugsiyadeeda waxaa taageera labada urur ee Soomaaliya oo dhan caanka ka ah HIRDA iyo IQRA. Dugsiyo hoose dhexe, sare iyo xarumo bixiya waaxbarashada dadka waaweyn ayaa
Urur la yiraah Badbaadada ayaa wuxuu gacanta ku hayaa xarunta ugu balaaran ee waxbarashada dadka waaweyn.
Sanadki 2015ka biloowgeda aya waxa si rasmi eh Magalada Caabudwaq looga furay Jaamacada Galgaduud taasi oo dhaqaalo fara badan loogaga aruuriyay wadamada reer galbeedka oo eey ku sugan yihin qurbajoog badan oo u dhashay deeganka caabudwaq.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Caabudwaaq&oldid=199787"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Maarso 2020, marka ee eheed 08:58.